Uyazi ukuthi iyini inkolo? - Isisekelo se-Afrikhepri
EAkukhona ezingomeni, noma emkhosini, kungaba owamaHindu noma omunye, noma ekukhonzeni umuntu akunikeza onkulunkulu bensimbi noma bamatshe, noma emathempelini noma amasonto, noma ekufundweni kweBhayibheli noma kwe-Gîta, noma ekuphindaphindweni kwegama elingcwele, noma ekuthumeleni inkolelo-ze eyodwa noma enye eqanjwe ngabantu. Inkolo ayikho kulezi.
Inkolo ingumbono wokuthi yikuphi okuhle nokulungile, yilolu thando olufana nomfula, luqhubeka njalo. Kulesi simo uzothola ukuthi kufika isikhathi lapho konke ukufuna kuphelile, futhi ukuphela kwalolo hlelo kuyisiqalo sento ehluke ngokuphelele. Ukufunwa kukaNkulunkulu, ngeqiniso, umuzwa wokuba wobuhle obungenamkhawulo ongahlangene nakancane nokulunga okutshaliwe, kepha ukuthobeka kokunye okungaphezu kokusungulwa futhi ukukhohliswa kwengqondo, okusho ukuthi umuntu uyazwela kule nto, leyo inkolo yeqiniso. Kepha uzokwazi ukwenza lokhu kuphela lapho ushiya ichibi elimile olimbe ngezandla zakho, ungene emfuleni wokuphila.
Ngemuva kwalokho impilo ikunakekela ngezinga elimangalisayo, ngoba awusadingeki. Impilo ikusa lapho ifuna khona ngoba uyingxenye yako; lapho-ke ukuphepha akuseyona inkinga, ngakho-ke akunandaba ukuthi umuntu angathini noma angasho ukuthini: Lokhu ubuhle bempilo. "
Umqondo wenkolo uhluke ngokuphelele kowakholelwa enkolweni. Awukwazi ukuba nenkolo futhi ngesikhathi esifanayo ube ngumHindu, uMuslim, umKristu, umBuddha. Ingqondo yenkolo ayifuni okuthile, ayinakuba nokuhlangenwe nakho okuthile ngeqiniso, ngoba akuyona into engalawulwa isifiso noma ukuhlupheka, noma isimo, isiHindu noma okunye.
Umoya wenkolo yisimo somqondo lapho kungekho kwesaba, ngakho-ke akukho nkolelo yanoma yiluphi uhlobo, kodwa kuphela lokho "okuyikho", okungukuthi, kunoma yikuphi.
Emoyeni wenkolo kunesimo sokuthula ebesesisicabangile. Ayenziwa ngomcabango, kepha nge-lucidity okuwukuzindla, lapho umlamuli engekho ngokuphelele. Kulokhu kuthula isimo samandla lapho kungekho kungqubuzana khona. Amandla isenzo nokunyakaza. Zonke izenzo ukunyakaza futhi zonke izenzo zingamandla. Konke ukucabanga kungamandla. Konke okuphilayo kungamandla. Yonke impilo ingamandla. Uma la mandla evunyelwe ukugeleza ngaphandle kokuphikisana, ngaphandle kokumelana, ngaphandle kwezingxabano, akunamkhawulo futhi akupheli. Lapho kungekho ukuphikiswa, ayinayo imingcele. Ukuphikisana nakho kuyayikhawulela.
Izimvo Zokuphila: Kuhlanganisiwe
Okusha okungu-4 kusuka ku- € 18,00
Kusetshenziswe okungu-4 kusuka ku-29,04 €
Thenga i- € 18,00
Kugcine ukubuyekezwa ngoMashi 1, 2021 9:34 PM